आलु उत्पादन बढाउने अभियानमा गुराँस गाउँपालिका
दैलेख । तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा आलु उत्पादन बढाउन गाउँपालिकाले विभिन्न योजना अघि सारेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिकाले तरकारी पकेट क्षेत्र बनाउन किसानलाई अभिमुखीकरण तालीम, कृषि सामग्री तथा बीउमा अनुदान वितरण र कृषि कर्जा प्रवाहमा सहयोग गर्ने अभियान चलाएको हो ।
गाउँपालिकाले तरकारी उत्पादनबाट हुने वार्षिक ३० करोड आम्दानीलाई ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विभिन्न योजनाहरू समेत शुरू गरेको छ । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै कृषि र पर्यटन क्षेत्र हो । कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी तरकारी उत्पादनको ‘हब’ बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ । पालिका भर २ हजार व्यावसायिक कृषक छन् । गाउँपालिकाका आठओटै वडामा अग्र्यानिक मौसमी, बेमौसमी तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । बाह्रै महिना हुस्सु, कुहिरो र पानी पर्ने भएकाले सिँचाइको अभाव नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
सिँचाइ नभएका स्थानमा आकाश घैंटोबाट पानीको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि गुराँसलाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पहल थालेको छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी सुर्खेतका विभिन्न तरकारी बजारमा पुग्ने गर्दछ । साथै, दैलेख सदरमुकाम र नेपालगञ्ज समेत निर्यात हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए ।
नयाँ प्रविधिबाट बीउहरू उत्पादन गरी आलु उत्पादन बढाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले यो वर्ष रू. १ करोड समेत विनियोजन गरेको छ । ‘परम्परागत रूपमा आलु उत्पादन गर्दै आएका कृषकलाई आधुनिक प्रविधि र गाउँमै उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाले अभियान समेत चलाएको छ,’ उनले भने । बाह्रैमास तरकारी उत्पादन हुने उक्त क्षेत्रमा आलु मात्र वार्षिक रू. ८ करोड बराबर जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गर्दछ । पछिल्लो समय रारा, मानसरोवरलगायतका क्षेत्रको भ्रमणमा आएका पर्यटकहरू फर्किंदा यहाँको आलु लिएर जाने गरेको स्थानीय कृषक मानबहादुर खड्काले बताए ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना : दुईपटक म्याद थपिँदा समेत विद्युत्गृह निर्माण अधुरै[२०७७ जेठ, १८]
क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू विद्यालय परिसरको काममा व्यस्त[२०७७ जेठ, १८]
कैलालीका ७ स्थानीय तह मिलेर अस्पताल सञ्चालन गर्दै[२०७७ जेठ, १७]
कोरोनाको जोखिम बढेसँगै घटे केरा खेती गर्ने कृषक[२०७७ जेठ, १४]
विद्युत् बचत गर्ने नाममा महँगा विद्युतीय गाडीलाई छूट दिइदैंन : अर्थमन्त्री
संक्रमित भेटिएसँगै बन्द रहेको धनकुटा अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा